Sawir:Hoggaamiyaasha Maraajicda Shiicada Ciraaq Oo Dareeska Melleteriga Soo Xirtay Kuna Baaqay Xasuuq Ka Dhan ah Muslimiinta Sunniga.
Wednesday June 18, 2014 - 21:34:50 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaasha ugu sareeya shiicada Iraaq iyo Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay dhaxda u xirteen dagaalka ka dhanka ah muslimiinta sunniga ah ee wadanka Ciraaq qeybo katirsan ka socda.
المرجع الرافضي القزويني يرتدي الزي العسكري ويدعوا للجهاد ضد الدولة الإسلامية
Madaxweynaha Shiiciga Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa magaalada Dahraan ka sheegay in ciidamo dhanka lugta ah ay udiri doonaan Ciraaq haddii khatar lageliyo qabriyo ay shiicadu caabudaan oo kuyaal magaalooyinka Najaf iyo Karbalaa.
Ruuxaani wuxuu walaac ka muujiyay is fidinta baaxadda leh oo ay sameynayaan mujaahidiinta dowlada Islaamiga ah ISIS oo lawareegay magaalooyin muhiim ah oo Ciraaq katirsan.
Telefeshinka Alciraaqiyah ee afka xukuumadda Al Maaliki ku hadla waxaa kasoo muuqday Aayatullaahi Cali Sistaani iyo wadaado ku sheego shiico Mushrikiin ah oo dareeska melleteriga soo xirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Baqdaad Hoshyar Zibaari oo shir jaraa’id qabtay wuxuu xaqiijiyay in culimada Sacuudiga ka dalbadeen in ay soo saaraan Fatwo ay ku diidayaan jihaadka ka socda wadanka Ciraaq.
Sheekh Max’med Al Cadnaani afhayeenka dowladda Islaamiga ah ayaa dhankiisa sheegay in kumanaan kamid ah muslimiinta sunniga Ciraaq ay iyagoo mutadawiciin ah usoo buuxinayaan xeryaha tababarada mujaahidiinta si ay dagaalka uga qeyb galaan.